Iskii u shaqeysta, ama halkii microbusiness, waa xaalad faa'iido leh oo lagu dhawaaqayo hawl yar iyadoo la xadidaayo habraaca maamulka. Iyadoo in ka yar 1,7 milyan oo ganacsato yar-yar ah oo Faransiis ah bishii Diseembar 2019 (+ 26,5% in ka badan hal sano), sida laga soo xigtay Xiriirka ganacsatada baabuurta, xaaladdu runtii way sii socotaa khiyaanaynta. Ku dhowaad kalabar ganacsiyada laga abuuray Faransiiska waa ganacsiyada yaryar (47% ee 2019).
Si kastaba ha noqotee, ka dambeynta fudud ee muuqda ee sharciga, su'aasha ku saabsan mas'uuliyadda qofka iskaa u shaqeysta wuxuu qaadanayaa khatar weyn oo marar dhif ah la sheego.
Mas'uuliyadda aan xadidnayn ee ganacsigaaga iyo hantidaada shaqsiyeed
Adoo qaadanaya xaaladda ganacsade shakhsi ahaaneed ee ku dhex jira qaab-dhismeedka shirkadda yar-yar, mas'uuliyaddaadu waxay ku hawlan tahay hab aan xad lahayn oo ku saabsan hantidaada xirfadeed iyo tan shaqsiyadeed, gaar ahaan haddii ay dhacdo soo-celinta.
Si kastaba ha noqotee, waxaad haysataa difaac ku saabsan adiga Deganaansho maamule, lagu ogaan kari waayoha ahaato mid lagu haysto lahaansho buuxda, gacan ku dhigid ama lahaansho qaawan.
Haddii aad leedahay hanti ma guurto ah oo kale oo aan lagu dirin hawshaada (tusaale ahaan dhul ama guri labaad), waad awoodaa
Shirkad-ganacsi-yar: taxaddar, hantidaada shakhsiga ah waa lala wareegi karaa! July 10th, 2021Tranquillus
READ Liistada qaaska ah ee Excel 2010
horeSidee loo bixiyaa magdhowga bukaanka?
socdaMaaskarada khasabka ah ee ganacsiga ... marka laga reebo qaar ka reeban
Xalliyaan dhibaatooyinka maareynta mashruuca ee ugu caansan